सर्वश्रेष्ठ सीओडी मोबाइल नियन्त्रक (नोभेम्बर २०२०) - पढ्नु पर्छ - सामान
Best उत्तम COD मोबाइल कन्ट्रोलरहरू - पढ्नु पर्छ
कल अफ ड्युटी विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक हो, र यो खेल्ने व्यक्तिको स regarding्ख्याको सम्बन्धमा एक अग्रणी रहेको छ। यो २०० 2003 मा सुरू गरिएको थियो। सुरुमा यो पीसी र ल्यापटपमा मात्र खेल्न सकिन्छ, तर स्मार्टफोनको उदय पछि यसको मोबाइल संस्करणको लागि सख्त आवश्यकता देखियो। एक स्मार्टफोनको कुनै व्यापक किबोर्ड छैन र यो कर्तव्य कल जस्तै एक खेल खेल्न छिटो चालको लागि सानो टच स्क्रीन प्रयोग गर्न सजिलो छैन।
त्यसोभए, मोबाइल कन्ट्रोलरहरू आविष्कार गरिएको थियो जुन तपाईंको गेमि experience्ग अनुभव तपाईंको स्मार्टफोनमा अधिक रमाईलो, मनोरन्जनकारी र व्यापक बनाउनको लागि हो। खेल खेल्नका लागि पोर्टेबल कन्ट्रोलरले तपाईंलाई गेमप्लेलाई यसको लचिलो र बटनहरू कायम गर्न सजिलोसँग नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले गेमप्ले सजिलो र अधिक कुशल बनाउँछन्।
सर्वश्रेष्ठ सीओडी मोबाइल कन्ट्रोलर-शीर्ष List सूची
शायद तपाईं कल अफ ड्यूटी खेल्नको लागि एक खेल नियन्त्रकको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए, हामीले तपाईंलाई स्मार्टफोनमा सीओडी खेल्नका लागि बजारमा उपलब्ध उत्तम मोबाइल कन्ट्रोलरहरू मध्ये एकमा छिटो जाँच दिने विचार गर्‍यौं।
Chromebook मा कसरी रोबक्स प्ले गर्ने?
१. बेनकोल मोबाइल नियन्त्रक
यो एक उत्कृष्ट मोबाइल नियंत्रक हो जुन तपाइँको स्मार्टफोनमा शुल्क को कल खेल्न को लागी उपलब्ध छ। यो दुबै एन्ड्रोइड र आईओएससँग उपयुक्त छ र १२ गति नक्शा नियन्त्रण बटनहरूको साथ आउँदछ। CoD खेल्नको लागि तपाईंको स्मार्टफोनको साथ यो उपकरण प्रयोग गर्ने बित्तिकै तपाईंसँग विशाल र रमाइलो गेमिंग अनुभव हुन सक्छ।
उत्कृष्ट गुणस्तर निर्माण
प्रिमियम गेमि experience अनुभव
उत्कृष्ट एनालग स्टिक
कुनै ब्याट्री सूचक छैन
२. गेमसिर G6 मोबाइल कन्ट्रोलर
गेमसिर जी एकल हातले, वायरलेस मोबाइल नियन्त्रक तपाईंको स्मार्टफोनमा खेल खेल्नको लागि हो। यो बजारमा नयाँ छ र नयाँ विशिष्टताहरू छन्। यो दुबै कन्ट्रोलर र टच स्क्रीन नियन्त्रण राख्दा तपाईंलाई खेल्न मद्दत गर्दछ।
दस नियन्त्रण बटनहरू
उत्कृष्ट खेल अनुभव
एन्ड्रोइड समर्थन गर्दैन
In. १ मोबाइल नियन्त्रणकमा
यस मोबाइल गेम कन्ट्रोलरले तपाईंलाई एकै साथ ट्रिम, लक्ष्य, चाल, र बटनहरू नियन्त्रण गर्न अनुक्रमणिका औंलाहरू प्रयोग गरेर मात्र शूटिंगको लाभ प्रदान गर्दछ। यस मोबाइल नियन्त्रणरले तपाइँको थम्बलाई कुनै पनि अतिरिक्त नियन्त्रणको समस्याबाट मुक्त गर्दछ।
यसका अतिरिक्त यो उन्नत र स्मार्ट कूलि fan प्रशंसक र निर्मित 400०० एमएएच ब्याट्रीको साथ आउँदछ जुन स्मार्टफोनको तापक्रम कम गर्न उपयोगी छ र साथसाथै स्मार्टफोनलाई चार्ज गर्दछ।
स्मार्टफोन चार्ज गर्दछ र यसको तापक्रम कम गर्दछ
Control मा १ नियन्त्रण प्रणाली
थोरै सानो टचप्याडहरू
Steel. स्टिलसरीज स्ट्र्याटस डुओ
यो एक वायरलेस गेमि control कन्ट्रोलर हो र एन्ड्रोइड, विन्डोज र वीआर हेडसेटसँग उपयुक्त छ। यसले तपाईंलाई उत्कृष्ट खेल अनुभव प्रदान गर्दछ। यो २० घण्टाको ब्याट्रीको साथ आउँदछ जुन लामो दूरीको गेमि session सत्रहरूका लागि उत्तम हुन्छ।
यसको २.4 गिगाहर्ट्ज जडानले तपाईंलाई शून्य ल्याग सुनिश्चित गर्दछ, जसले तपाईंलाई खेलमा तपाईंको बन्दूकको क्षति हराउन दिदैन।
IOS समर्थन गर्दैन
Easy. EasySMX ग्रिप
EasySMX ग्रिप मोबाइल कन्ट्रोलर तपाईंलाई ह्यान्डल गर्न सजिलोको साथ प्रदान गर्दछ र वायर्ड र भारी मोबाइल नियंत्रकहरू बदल्छ जुन ह्यान्डल गर्न सजिलो छैन। यो मोबाइल नियन्त्रणरले तपाईंलाई थप पकड प्रदान गर्दछ र तपाईंको स्मार्टफोनमा ट्रिगरहरू थप गर्दछ।
यसमा एक कूलि fan फ्यान पनि समावेश गर्दछ तपाईंको फोनलाई ओभर-हीटिंगबाट बचाउनको लागि।
ह्यान्डल गर्न सजिलो
परम खेल अनुभव
सीओडी मोबाइल कन्ट्रोलरहरू कति उपयोगी छन्?
यद्यपि स्मार्टफोनमा खेलहरू खेल्नु पनि रमाईलो छ र तपाइँ तपाइँको मनपर्ने खेल कहिँ पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। स्मार्टफोन गेमिंग संसारबाट धेरै परिवर्तन भएको छ। शूटि and र अन्य त्यस्ता हाई प्रोफाइल खेलहरू खेल्न अब पीसी वा ल्यापटपको आवाश्यक पर्दैन। तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न र नन स्टप खेल्न सक्नुहुन्छ।
यसको विपरित, मोबाइल फोनमा खेलहरू राख्नु दुई कारणहरूको लागि थोरै निराश हुन सक्छ। पहिलो यो हो कि तपाईंको स्मार्टफोनको स्क्रीनहरूको सीमित स्थान छ, र दोस्रो, तपाईं टच स्क्रिनमा नियन्त्रणहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
त्यस्ता समस्याहरूको सामना गर्न, मोबाइल कन्ट्रोलरहरू तपाईंको लागि एक खेल प्रेमीको रूपमा सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यदि तपाईं CoD को प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको मोबाईलमा एक मोबाइल नियन्त्रकको साथ खेल्दा तपाईंलाई अधिक सहजता र उत्साहका साथ अनुभव गर्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, एक मोबाइल नियन्त्रकले जित्ने सम्भावनाहरूलाई बढाउँदछ किनभने यसले सजिलै हाम फाल्न, डज, सार्न, र शुट गर्दछ।
मोबाइल नियन्त्रणकर्ताहरूले मोबाइलमा गेमप्ले परिवर्तन गरेका छन्। कल अफ ड्युटीको रूपमा खेलहरू मोबाइल कन्ट्रोलर प्रयोग गरेर स्मार्टफोनमा खेल्नको लागि धेरै छ। सानो स्क्रिन र सीमित टच स्क्रिन नियन्त्रणले तपाईंलाई खेल्दै अब निराश पार्दैन।
एक मोबाइल कन्ट्रोलर प्रयोग गर्नाले तपाईलाई रमाईलो र रमाईलो गेमिंग अनुभव बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ, तर यसले चिकन नियन्त्रण बटनहरूको साथ तपाईंको गति बढाउँदै विजयी हुने सम्भावनालाई पनि बढाउँदछ।
हामी आशा गर्छौं कि हामीले तपाईंलाई मोबाइल कन्ट्रोलरहरूको विस्तृत विश्लेषण दिएर र माथिको लेखमा दुई उत्तम उत्पादनहरू थप्दै सीओडीका लागि उत्तम मोबाइल नियन्त्रण प्राप्त गर्न पर्याप्त मद्दत गर्यौं।।
Tencent गेमि Budd बडी डाउनलोड
विन्डोज १० को लागी Best उत्तम iMovie विकल्प
स्ट्रिम चलचित्रहरू अनलाइन अनलाइन साइनअप हुँदैन
स्कूलको लागि संगीत साइटहरू अनब्लक गरियो
तपाईं ट्यूब फिल्म अनलाइन हेर्नुहोस्
गोफन टिभी धेरै उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
एन्ड्रोइड फोनका लागि किक अनुप्रयोग
कुनै पनि भाइरस अनलाइनमा नि: शुल्क चलचित्रहरू हेर्नुहोस्
नि: शुल्क कार्यक्रमहरू र फिल्महरू अनलाइन डाउनलोड बिना नै